Tag: blog martida | Martech Zone
Tag: blog martida
Sabtida, Juun 16, 2018 Monday, June 18, 2018 Douglas Karr
TribeLocal waxay soo saartay sahan qoto dheer oo soo saaray cilmi baaris fara badan oo ku saabsan sida shirkadaha iyo macaamiisha ay u adeegsanayaan baraha bulshada sida ay ula xiriirto sumadaha. Su'aalo-waydiinta shirkadda waxay diirada saartay dhowr arrimood oo ay awoodaan inay ku ogaadaan iyagoo adeegsanaya daraasado kala duwan. Guud ahaan natiijooyinka ka soo baxay sahanku waxay ahaayeen: Ganacsiyadu wali si buuxda uma aqbalin baraha bulshada Isticmaalayaasha waxay rabaan magacyadooda inay ka taxadaraan iyaga iyo bulshada Shabakadaha Isgaarsiinta Bulshadda Sare iyo Adeegsiga illaa 2018
Marti gelinta martida ayaa ah geedi socod adag oo xasaasi ah oo ay tahay in loola dhaqmo sida bilowga xiriir kasta: si dhab ah oo taxaddar leh. Anigoo ah milkiile blog ah, kuuma sheegi karo inta jeer ee la iimayl ahaan si xun u qoray, emayllada spammy. Baloogyada, sida cilaaqaadka, waxay qaataan dadaal badan oo boggaga martida loo yahay waa inuusan ula dhaqmin sidii geedi socod aan macquul ahayn. Halkan waxaa ah 7 tilmaam shukaansi oo hubin ah oo loogu talagalay boodhadhka martida ee maxkamadda blogger: 1. Hel